शेयर बजारमा सेमिअनलाइनको प्रभाव, 'अन्य बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढ्यो | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर शेयर बजारमा सेमिअनलाइनको प्रभाव, ‘अन्य बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढ्यो
मुख्य खबर, लगानी 273 views
शेयर बजारमा सेमिअनलाइनको प्रभाव, ‘अन्य बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढ्यो
वैशाख ३, काठमाडौं । सोमवार नेप्से परिसूचक १ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेको छ । यस दिन १ हजार ३ सयको विन्दुमा पुगेको नेप्से अन्त्यमा केही तल झरेको थियो । केही ब्रोकर कम्पनीहरुले सेमिअनलाइन कारोबार शूरु गरेपछि त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा परेको हो । अनलाइनबाट अर्डर गर्न सजिलो भएपछि कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव परेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । बीमा समूह र लघुवित्त समूहले शेयर बजारलाई उकालो लाग्न टेवा दिएको हो । परिसूचक १७ दशमलव ४२ अङ्कले बढेर १ हजार २ सय ९७ दशमलव ५७ विन्दुमा पुगेर टुङ्गििएको छ । यस दिन ‘अन्य’ समूह बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूहहरुको परिसूचक बढेको छ ।
कारोबार रकम भने ८८ प्रतिशत बढेर रू. ५७ करोड ६८ लाख पुगेको छ । र, बजार पूँजीकरणमा रू. २१ अबको वृद्धि भएर रू. १५ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव २० प्रतिशतले बढेर २ सय ७६ दशमलव २६ अङ्क पुगेको छ ।
यस दिन प्रभु इन्स्योरेन्सको रू. २ करोड ८७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस बीमा कम्पनीको ८१ पटकको व्यापारमा २१ हजार ५ सय ३४ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेर अन्तिम मूल्य रू. ७ सय २५ पुगेको छ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको मूल्य १० प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ७ सय ७० पुगेको छ । साथै, ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेपाल इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य करीब १० प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयरको मूल्य भने ९ दशमलव ९५ प्रतिशत घटेर अन्तिम मूल्य रू. ७ सय ८७ मा सिमित रहेको छ ।
कारोबारमा आएका बीमा कम्पनी तथा लघुवित्त कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेपछि यी समूहहरुको परिसूचक करीब ५ प्रतिशतले बढेको हो । साथै, होटल समूहको परिसूचक २ दशमलव ७७ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको २ दशमलव २७ प्रतिशत र विकास बैङ्कको १ दशमलव १२ प्रतिशत बढेको हो । जलविद्युत समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत र बैङ्किङको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत बढेको छ । ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १७ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन १ सय २४ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, २७ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने १६ कम्पनी स्थिर रहेका छन् । सो दिन १ सय ६७ कम्पनीको ६ हजार ८ सय ४ पटकको व्यापारमा ११ लाख ७८ हजार ७ सय ३८ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अर्थात् ५६ दशमलव ६६ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सामान्य रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो ४ दशमलव ५९ अङ्क रहेको छ । यसले बजार बुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
बजेटमा वीरगञ्जलाई विशेष प्राथमिकताः अर्थमन्त्री
८ बैशाख २०७५, शनिबार १२:४८